Calaqqee Maappii Gulaalaa
Hotspootii cuqaasamuu danda'an Fakkaattileetti Ida'uu
Jijjiirraa maappii calaqqee maappiitti taasifte fayyadama.
Iddoo ho'aa calaqqee barruyyaa keessatti gulaaluuf fila.
Unka akka feeteee Rogaddee
Mee boca--- filatamee qaxiilee kokorddii gulaaluudhaan jijjiiri.
Mee qabxiilee kokoddii dhuunfaa hotspotii filatamee filtaa.
Qabxii korkoddii bakka toorii hotspotii cuqaasftu ida'a.
Qabxii korkoddii filatamee haqa.
Geessituu hotspotii filatameef dhaamsa ykn dandeessisa hotspotii dhaame ifaadha.
Meee ati maakiroo ramaddu yeroo hotspotii filame iyyaataa keessaa hojjechiisuu cuqaasi.
Amala hikkama hotspotii filatame akka filtuu si'iif haayama.
Maqaa goodayyaa kan URL keeessa banuu barbaadde galchi. Ddabalataanis maqaa goodayaa durtii tarreeirraa filuu ni danddeessa.
Maappii calqqee akka hotspotsii cuqaasu fi gulaaluu dhandesuutti agarsiisa.
Guulaa Maapi Caqlaqee Gabateee cuqo waliin Too'achuu
Title is: Calaqqee Maappii Gulaalaa